Musqusha Qolka Musqusha Oo Lagu Nadiifiyay Nickel Oo Faafay
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qasabadaha Musqusha oo Fidsan / WOWOW 8 Qalabka tubada Musqusha oo Fidsan oo Burbursaday Nickel
Amazon US Amazon CA Amazon MX Tilmaamaha Rakibaadda PDF
NIIKO DHAMAYSTIRAN, XIDHIIDHAHA NAASKA ADAG: qasabad musqusha sare oo aad u wanaagsan oo ku jirta dhammayn nikkel buraash ah, oogo dhalaalaysa, xoqid ka hortag ah, daxal la'aan, meel biyo ah oo aan lahayn iyo daabacaadda farta, isku xidhaha naxaasta adag waxay hubisaa isticmaalka waqti dheer
2 GACAN, 360° HIGH SPOUT: ku habboon 2 haynta naqshad birta birta ah si loo xakameeyo saxda ah ee mugga iyo heerkulka biyaha labadaba, maraq labajibbaaran oo gaar ah oo loogu talagalay dhaqidda habboon, looma baahna inaad gacmahaaga kor u qaaddo
Rakibaadda Degdegga ah ee Hal-abuurka: dhismaha gaarka ah ee isku xidhka degdegga ah, biyaha kulul iyo kuwa qabow waxaa lagu qasi karaa tuubo degdeg ah oo aan lahayn fur, iyada oo loo marayo farsamo looga hortagayo dillaaca tuubada
Naqshadaynta BANDHIGGA BANDHIGGA AH: 4 -16" tubooyinka musqusha ee fidsan 3-dalool, fogaanta rakibidda waxaa lagu hagaajin karaa shuruudaha, ku habboon guri kiro ah, guri cusub, guri hal dabaq ah, guri mooto ah, trailer safarka iyo isticmaalka qoyska
DAMMAANKA, TAAGEERADA MACMIILKA: 5-sano damaanad qaadka iyo taageerada macaamiisha ayaa la bixiyaa. Waxaa daboolay soo noqoshada 90-maalmood. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
Suuliga tubbada musqulaha ee loo yaqaan 'nickel' ayaa si aad ah loo burburiyey 2320300
Ma ogtahay in tuubada suuligaagu ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan musqushaada xaga naqshadaynta? Xitaa iyagu waa yar yihiin, qasabadaha ayaa saameyn weyn ku yeelan kara qurxinta musqushaada. Musqusha musqusha waa barta dabiiciga ah ee udubdhexaadka u ah nashqadeynta musqusha kasta. Taasi waxay ka dhigan tahay markii qof uu galo musqusha, waxyaabaha ugu horreeya ee ay dareenkiisa soo jiitaan, waa qasabadaha musqusha. Sidaa darteed tuubada musqusha waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa naqshad kasta oo musqusha ah waana in si xikmad leh loo xusho.
Tani waxay muujineysaa inaad si wanaagsan u xulanayso qasabadda musqusha. Waxaa suuragal ah inaad miisaaniyad (kooban) u leedahay musqushaada cusub. Badanaa waxaan aragnaa in tuubbooyinka musqusha aan lagu darin naqshadda iyo miisaaniyadda bilowga ah. Musqusha qasabada musqusha waxaa hadaba la xushaa oo kaliya dhamaadka howsha, halka musqusha mar horeba la rakibay. Waxay noqon kartaa wax caqabad ku ah helitaanka tuubada musqusha oo ku habboon dookhaaga naqshadeynta iyo miisaaniyaddaada. Miisaaniyadaha musqusha ayaa badanaa dhammaada dhamaadka sababo la xiriira dhacdooyin lama filaan ah, oo ma doonaysid inaad wax u dhinto naqshadeynta iyo tayada xulashada qasabadda musqusha. Gaar ahaan markaad ogtahay in qasabadaha musqusha ay saameyn weyn ku yeelan karaan qurxinta guud ee musqushaada. Sidaa darteed way fiicantahay in la ogaado in WOWOW ay ku siineyso qasabadaha suuliga muuqaal iyo xarrago leh qiimo jaban. Sidaa awgeed, WOWOW waxay ku siineysaa qiimaha ugu fiican ee lacagta.
Qubeyska tuubada birta adag ee cadaanka ah ayaa cadaatay
WOWOW musqusha qasabada musqusha ee nikkel balaaran waxay ka sameysan tahay bir adag. Isla markiiba waad ogaan doontaa markaad gacanta ku hayso qasabaddan musqusha. Musqusha qolka musqusha ayaa cadayday culeysyada nikkel ee balaaran 3.8 lbs taas oo muujineysa tayadeeda shaki la'aan. Waad hubi kartaa qasabad tayo sare leh oo musqusha ah oo socon doonta sannado badan, sannado badan. Dhab ahaan, qalabka naxaasta adag ayaa aad uga fiican biraha kale. Noocyada noocan ah ee macdanta badan ee birta ah uma baahnid inaad ka walwasho dhammaan dhibaatooyinka daxalka tusaale ahaan. Ka sokow, qalabka tayada sare leh waxay bixiyaan xasiloonida iyo nolosha badeecada ugu badan. Tayada biyahaagu sidoo kale waxay noqon doontaa bilaash bilaash sidaa darteedna xulashada ugu fiican caafimaadkaaga.
Ka sokow, qasabadda musqusha ee nadiifisay nikkel baahsan waxaa lagu dhammeeyay dusha nikeliyada la caday. Ma aha oo kaliya dhammeystirkaani inuu ku siinayo taabasho qurux badan nashqaddaada musqusha, sidoo kale waa mid u adkeysata u adkeysiga. Dhamaadka nikkel-ka ee la cadaystay ayaa ka hortagaya qoyaanka iyo xoqida, taas oo ka dhigaysa qasabada musqusha qasabada nikkelku inay xoqdo xoqan iyo wasakhda. Sidaa darteed waa raaxeysane furaha-hooseeya ee musqushaada, taasi waa fududahay in la nadiifiyo adigoo maro ku tirtiraya. Fudud sida tan!
Qubeyska buluuga ah ee loogu tala galay bulukeetiga
Qubayska biyaha tubada biyaha ee WOWOW ee loo yaqaan 'nickel' buluug ballaadhan ayaa leh muuqaal laba xabo oo musqusha aad u ballaadhan oo buuxinaya baahiyahaaga si aad ula qabsato mugga biyaha kulul iyo qabow si gooni gooni ah. Naqshadeynta baahsan ayaa sidaas darteed sidoo kale lagu hagaajin karaa laga bilaabo 4 illaa 16 inji. Qashin-qubadu waxay kaliya ubaahan tahay meel 3-dalood leh iyo masaafada lagu rakibo waxaa lagu hagaajin karaa dookhaaga shaqsiyadeed iyo shuruudahaaga.
Muuqaalka sare ee laba-geeska ah ee runti waa naqshad u gaar ah oo aadan ku arki doonin tuubbooyinka musqulaha kale ee badan oo aad ka heli karto suuqa. Qubooyin badan oo musqulaha ah ayaa u eg kuwo isku mid ah. Si aad u hesho wax gaar ah oo quseeya tubooyinka tubada ayaa noqon kara wax adag. Ka sokow naqshadeeda geesinimada leh, tuubada sare ee musqusha buluuga ah ee buluuga ah waxay siisaa ku siidayn buuxda xagga hoosta si aad u bixiso raaxada ugu badan. Sidaa darteed qubayska musqusha ee khafiifka ah ee qaab ahaan u qaabaysan labadiinaba waxay idiin soo bandhigaysaa muuqaal casri ah iyo raaxo isku mar. Intii ficil ahaan ahaan loo baahnayn, maaha inaad gacmahaaga fidiso ilaa aad ka gaadho socodka biyaha. Taasi waxay ka dhigeysaa hawl fudud.
Suuliga musqusha si fudud ayaa looga shaqeeyaa
Labada gacmood ee tubadan musqusha ku habboon ayaa ku siinaya suurtagal inaad si sax ah u maamusho mugga iyo heerkulka biyaha. Labada gacmeed waxay ka samaysan yihiin zinc alloy adag waxayna bixiyaan xajin fudud oo si fiican weli loo habeeyay. Kaliya ma aha musqulaha buluuga buluuga ah ee loo yaqaan 'nickel bagrus fidiyaha' in si habsami leh loogu shaqeyn karo, sidoo kale tuunbada lafteeda ayaa bixisa heer 2 digrii ah. Sidaa daraadeed waxaad ku ridi kartaa tubbada tubbada buluuga ah ee loo yaqaan 'nickel nickrus' oo aad u balaadhan sida ugu habboon adiga, isla markaana waxaad u jeedsan kartaa dhanka dambe. Taasi waxay kuu fududaynaysaa inaad nadiifiso saxanka musqushaada tusaale ahaan.
Ka sokow hawlgalkeeda sahlan, tubada qasabada musqulaha ee loo yaqaan 'nickel' balaariyay sidoo kale si fudud ayaa loo rakibi karaa. Muuqaalkeeda hal abuurka leh ee deg degga ah ayaa gaar u ah suuqa. Tani waxay suurtagelineysaa inaad ku xirnaato dhammaan xiriirada si badbaado leh oo si fudud naftaada keligaa. Khadadka biyaha kulul iyo kuwa qabowba waxaa isku dhafan tuubbooyinka deg-degga ah ee si fudud lagu dhejin karo iyada oo aan jeexan. Farsamadan saxda ah waxaad sidoo kale hubtaa in dhuumaha biyuhu aysan dillaaci doonin. Musqusha buluuga buluuga ah ee buluuga ah ee baahsan waa fududahay in la rakibo iyada oo aan la isticmaalin tuubbo qaali ah.
Qubayska suuliga musqusha ee dammiinka
Musqusha qasabada musqusha ee nikkel ballaaran ayaa la timid dhammaan agabyada loo baahan yahay, oo ay ku jiraan xirmada rakibidda. Ka sokow qulqulka laba jibbaaran ee sare iyo 2 gacantiisa, xirmada waxay la timid marin biyood, 2 tuubbo biyo ah oo 50 cm ah oo loogu talagalay biyo qabow iyo kulul, 1 ayaa soo baxa oo joojiya cadaadiska iyo qalab iyo qalab dhammaystiran.
Maaddaama WOWOW dammaanad ka qaaddo inay bixiso qiimaha ugu fiican ee lacagta, qasabadda musqusha ee lagu nadiifiyo nikkel ballaaran ayaa la socota dammaanad 90 maalmood oo lacag celin ah. Haddii aadan kula yaabi doonin qiimaha lacagta aad hesho, waad soo celin kartaa qasabada musqusha ee lagu nadiifiyo nikkel oo baahsan iyadoo aan wax dhibaato ah qabin. Waxaa laguu dammaanad qaadayaa lacag celin buuxda iyadoo aan wax su'aalo ah la weydiinin. Ka sokow, WOWOW waxay ku siinaysaa muddo 3-sano ah oo dammaanad qaad ah. Haddii tuubada suuligaaga lagu nadiifiyo nikkel baahsan aysan u qaban doonin sida aad filaysay inay qabato, WOWOW waxay ku beddeli doontaa tuubada musqusha mid cusub oo cusub. WOWOW masuuliyadeeda si dhab ah ayey uqaadaneysaa waligoodna kaa yeeli mayno.
Faa'iidooyinka musqulaha qubayska musqusha ee loo yaqaan 'nickel' ayaa si baahsan u faafay:
• Musqusha waxeey ku siinayaan walxo-walwal
• Qaab aan caadi ahayn 7-qaab
• Dhameystirta ciribtir leh oo qurux badan
• Alaabada birta culus
• Adkaysi cimri dheer
• Way fududahay in la nadiifiyo oo ay fududaato in la dayactiro
• 3 sano oo damaanad qaad ah
SKU: 2320300 Categories: Qasabadaha Musqusha oo Fidsan, Qubeyska Musqusha Tags: 2 Gacmaha, Nickel caday
11.2 x 10.1 x 3.2 inches
Naaxa / ahama birta / Zinc Daawaha
Bidix iyo Midig
Biyo kulul / qabow
3 Hole Casri ah matte madow oo ballaadhan musqulaha F...
La iibiyey: 61
WOWOW Touch Soap Dispenser Ganacsi
Qubayska Qolka Musqusha ee WOWOW Xarun Furiin ...